चितवनमा सवारी दुर्घटनाको संख्या दोब्बर वृद्धि - kageshworikhabar.com
चितवनमा सवारी दुर्घटनाको संख्या दोब्बर वृद्धि
६ श्रावण, चितवन। चितवनमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आवमा सवारी दुर्घटनाको सङ्ख्या बढेको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार झण्डै दोब्बर संख्याले दुर्घटना बढेको हो ।
कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत आवमा ४३५ दुर्घटनामा भएका छन् । अघिल्लो आवमा २६१ सवारी दुर्घटना भएका थिए । गत आवमा दुर्घटना बढेसँगै मृत्यु हुनेको सङ्ख्यासमेत बढेको छ । गत आवमा १२८ जनाको मृत्यु भएको कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक भगवानराज थापाले जानकारी दिनुभयो । अघिल्लो आवमा १०७ जनाको मृत्य भएको थियो ।
गत वर्ष भएका दुर्घटनामा ७६३ घाइते भएका छन् । तीमध्ये २९० गम्भीर र ४१३ जना सामान्य घाइते भएका छन् । ती दुर्घटनामा ६६४ सवारी साधन पक्राउ परेका छन् । कोरोनाका कारण गरिएको निषेधाज्ञाका समयमा समेत मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी सञ्चालन गर्ने, दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन तीव्रगतिमा चलाउने गरेका कारण दुर्घटना बढेको थापाले बताउनुभयो । दुर्घटना हुनेमा बढी सङ्ख्यामा दुई पाङ्ग्रे सवारी रहेका छन् ।
कार्यालयका अनुसार गत आवमा कार्यक्षेत्रमा खटिएका प्रहरीलाई प्रलोभनमा पार्न खोज्ने २३६ जनालाई कारवाही गरिएको छ । उनीहरुबाट कारवाहीस्वरुप रु दुई लाख ४४ हजार ५०० जरिवाना गरिएको छ । यस्तै ५४८ जना मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने चालकलाई समेत कारवाही गरिएको छ । उनीहरुबाट रु पाँच लाख ४८ हजार राजश्व सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तै कार्यालयले गत आवमा ३८ हजार ६२२ वटा सवारी साधन कारवाही गरी रु तीन करोड ३० लाख ३७ हजार राजश्व सङ्कलन भएको छ ।
Previous articleबस पल्टिँदा एकको मृत्यु
Next articleवरिष्ठ कलाकार उत्तम नेपालीको निधन
जडीबुटी र फलफूलका बिरुवा वितरण गरिँदै
कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहँदा काभ्रेमा सामुदायिक विद्यालय खुलाइँदै
लागुऔषध कारोवार गर्ने १५१ जना पक्राउ
आज श्रावण ११ गते सोमबार, कस्तो छ तपाईंको राशिफल ?
निर्मला पन्तको दोषी पत्ता लगाउन प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन
भोलि श्रावण ११ गते सोमबार, कस्तो रहला तपाईंको दिन ? हेर्नुहोस्...
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो दुरुपयोग गरेर टिकटक बनाउने एक पक्राउ
नवनियुक्त स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठले लिए शपथ
काठमाण्डौ उपत्यकामा थपिए ६२४ जना कोरोना संक्रमित
काठमाण्डौ उपत्यकामा साउन २० सम्म थपियो निषेधाज्ञा